I-Vectr: Enye indlela yamahhala eya ku-Adobe Illustrator | Martech Zone
ULwesithathu, May 17, 2017 ULwesithathu, May 17, 2017 Douglas Karr
I-Vectr kuyinto mahhala futhi enembile kakhulu i-vector graphics editor uhlelo lokusebenza lwewebhu nedeskithophu. IVectr inejika eliphansi kakhulu lokufunda elenza ukuthi imidwebo yezithombe ifinyeleleke kunoma ngubani. IVectr izohlala ikhululekile ingapheli ngaphandle kwezintambo.
Uyini umehluko phakathi kweVector neRaster Graphics?
Kususelwa kuVector izithombe zenziwe ngemigqa nezindlela zokwakha isithombe. Banendawo yokuqala, iphoyinti lokugcina, nolayini phakathi. Bangakha futhi izinto ezigcwalisiwe. Ukusizakala kwesithombe sevektha ukuthi kungashintshwa usayizi kepha kugcinwe ubuqotho bento yoqobo. Kususelwa kuRaster izithombe zakhiwa ngamaphikseli kuzixhumanisi ezithile. Uma unwebisa isithombe se-raster kusuka kumklamo waso wokuqala, amaphikseli ayahlanekezelwa.
Cabanga ngonxantathu uma kuqhathaniswa nesithombe. Unxantathu ungaba namaphuzu ama-3, imigqa phakathi, bese ugcwaliswa ngombala. Njengoba unweba unxantathu ube usayizi ophindwe kabili, umane uhambisa amaphuzu amathathu ngokuqhubekayo. Akukho ukuhlanekezela noma yini. Manje nweba isithombe somuntu siphindwe kabili ubukhulu baso. Uzobona ukuthi isithombe sizobe sifiphele futhi sihlanekezelwe njengoba umbala wombala unwetshwa ukumboza amaphikseli amaningi.
Kungakho imidwebo namalogo adinga ukukhuliswa kabusha ngempumelelo kuvame ukususelwa ku-vector. Futhi yingakho sihlala sifuna izithombe ezinkulu kakhulu ezisuselwa ku-raster lapho sisebenza kuwebhu… ukuze zehliswe ngosayizi lapho kunokuhlanekezelwa okuncane kuphela.
IVectr iyatholakala ku-inthanethi noma ungalanda uhlelo lokusebenza lwe-OSX, Windows, Chromebook, noma i-Linux. Banesethi ecebile ye- izici kumephu yabo yomgwaqo lokho kungakwenza kube okunye okusebenzayo ku-Adobe Illustrator, kufaka phakathi izinhlobo ezifakiwe ezingafakwa kubahleli be-inthanethi.
Zama i-Vectr Manje!
Tags: imephu encanei-rasteri-raster ne-vectorVectori-vector graphics editori-vector ne-rasteri-vector-based graphics editori-vectr
Izibalo Zokumakethwa Kwevidiyo Ongase Ungazazi!